SERIE A: EMP VS ACM 1-4…Lapadula oo labaaleeydiisii ugu horreeysay ka dhaliyay Serie A jeer ay Milan kaalinta 2-aad xiratey + Sawirro – Gool FM
SERIE A: EMP VS ACM 1-4…Lapadula oo labaaleeydiisii ugu horreeysay ka dhaliyay Serie A jeer ay Milan kaalinta 2-aad xiratey + Sawirro
Raage November 26, 2016
(Empoli) 26 Nof 2016 – Gianluca Lapadula ayaa dhaliyay labaaleeydiisii ugu horreeysey ee uu ka dhaliyo Serie A iyp goolkii 3-aad 83 daqiiqo oo uu saftay, iyadoo uu Suso goolka kale ku daray midna waxaa iska dhalisay Empoli kulan ay 4-1 kusoo badisay kooxda AC Milan oo kaalinta 2-aad haatan keli ku noqotay.
Vincenzo Montella ayaa nasiyay dhowr laacib, halka Alessio Romagnoli uu dib ugusoo laabtay kooxda oo 10-kii kulan ee ugu dambeeyay hal mar oo qura laga badiyay.
Kooxda Empoli oo maamuusaysey kulankeedii 400aad ee Serie A ayaa soo xiratey funaanad gaar ah oo ay ku qoran yihiin magacyo iyo lambarro casuus ah.
Milan ayaa 10-kii daqiiqo ee ugu horreeyay aan so wanaagsan ku bilaabanin iyadoo baas uu sameeyay Gigio Donnarumma uu dhex ka dafay Krunic balse waxaa bannaanka marsiiyay qannaaska qawaarka ah ee Massimo Maccarone.
Waxaa Milan ka dhaawacmay Mati Fernandez oo hadda uun dhaawac kasoo noqday, kaasoo uu daqiiqaddii 10-aad bedeley Juraj Kucka.
AC Milan oo caawa ku badisay safkii ugu da' yaraa muddo 30 sano ah!